मेरो पाङ्ग्रेलाई कस्तो छ आमा ? – रमेश विकल – Ketaketi Online
मेरो पाङ्ग्रेलाई कस्तो छ आमा ? – रमेश विकल
July 17, 2010 December 21, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on मेरो पाङ्ग्रेलाई कस्तो छ आमा ? – रमेश विकल
आलोकले एकदिन स्कुलबाट घर आउँदा एउटा सानो छाउरो लिएर आयो । उसको मनमा धुकचुक थियो । भुस्याहा छाउरो बोकेर आयो भनेर आमाबाले केही भन्नुहुने पो हो कि ! गाली पो गर्नुहुने हो कि ?
तर आमाबाले त्यस्तो केही गर्नु भएन । बरु बाले खुसी हुँदै भन्नुभयो ‘अहो ! कति राम्रो छाउरो रहेछ, कहाँबाट ल्याएको ?’
‘स्कुलबाट बाबा !’, आलोकले भन्यो, ‘त्यहाँ स्कुलमा नि साथीहरू यसलाई दुःख दिइरहेका थिए । लट्ठीले पिटिरहेका थिए, घोचिरहेका थिए । त्यसैले मैले पैसा तिरेर ल्याएको । उनीहरू बदमास छन् । जसलाई पनि दुःख दिन्छन् । त्यसो गर्न हुँदैन हगि बाबा ?’, आलोकले बाबासँग जिज्ञासा राख्यो ।’
हो त्यसो गर्नु हुँदैन’, बाले भन्नुभयो, ‘बरु त्यस्ता दुःख पाएका निर्धाहरूलाई माया गर्नुपर्छ, दया गर्नुपर्छ । तिमीले ठीक गर्यौ ! यो कुकुरलाई फोहोरी घाउ पनि लागेको रहेछ । सफा गरेर औषधी लगाइदेऊ ।
‘घरमा आमाबाले यस्तै राम्रा असल कुरा सिकाएकाले आलोक सानैदेखि असल र राम्रो बानी व्यहोराको केटो थियो । ऊ साथीभाइ सबैसँग मिलेर बस्थ्यो । आफूभन्दा साना, निर्धा, दुब्लालाई माया गर्दथ्यो । केही पर्यो भन्ने मद्दत गर्न अघि सर्थ्र्यो । गुरुबागुरुआमालाई श्रद्धा गथ्र्यो, आदर गथ्र्यो । पाले दाइ, आया दिदीलाई पनि मान गथ्र्यो । त्यसैले उसलाई सबैले माया गर्थे ।
उसैको स्कुलमा एक जना छुच्चो केटो पनि थियो । ऊ धनीको छोरो थियो । उसको बाबु मन्त्री हाकि के हो त्यस्तै ठूला मान्छे थिए रे । त्यसैले ऊ बाबुको धक्कु देखाएर मनपरि गथ्र्यो । पढ्नुभन्दा केटाहरू बटुलेर बदमासी गथ्र्यो । साना कक्षाका विद्यार्थी, पाले दाइ, आया दिदीहरूलाई हेप्थ्यो । गुरुबागुरुआमालाई टेर्दैनथ्यो, सबैलाई दुःख दिन्थ्यो । त्यो बदमास केटाको नाम प्रचण्ड थियो ।त्यस दिन प्रचण्ड आफ्ना चण्डाल साथीहरूका साथमा त्यो सानो छाउरालाई सताइरहेको थियो । कोही पुच्छर निमोठेर घिसार्थे, कोही कानमा, नाकमा दिसा-पिसाब गर्ने ठाँउमा छेस्काले घोच्थे । बिचरो छाउरो कुइँकुइँ गर्दै भुक्थ्यो । तर उनीहरू त्यसलाई लखेटी-लखेटी समातेर घिसार्दै, लछार्दै ल्याएर अनेक दुःख दिइरहेका थिए । यो सबै देखेर आलोकलाई नराम्रो लाग्यो । उसले अगाडि गएर भन्यो, ‘किन तिमीहरूले यो बिचरा छाउरोलाई दुःख दिएको -”हामीलाई मन लाग्यो !’, प्रचण्डले जिराहा निहुँ खोज्ने स्वरमा भन्यो ।’
तँलाई के को चासो – तँ साले पाखेको छोरालाई – तेरा बाबु हो कि, दिदीबहिनी दाजुभाइ हो कि – हाम्रो काममा रोक लगाउन खोज्ने तँ को होस्, ऐले दिऊँ कि क्या हो -‘ उसले हप्काउँदै भन्यो ।बेकारमा आफ्नो बाबा र दाजुदिदीलाई उकासेको देखेर आलोकलाई रिस पनि उठ्यो । यसलाई जोरी पुर्याइदिने हो कि क्या हो – ऊ अगाडि सर्यो, तर उसको मिल्ने साथी ध्रुवले उसलाई रोक्यो, ‘भो छोड्दे ! सित्तैमा यस्तासँग किन जुध्नु – रछानमा चलाए आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ, जाऊँ हिँड् ।”के भनिस् – मलाई रछान भन्ने तँ – खोज्या होस् तैँले -‘, जुडो खेलाडीको पाराले प्रचण्ड निहुँ खोज्दै अगाडि आयो । यसपल्ट आलोकले अगाडि सरेर प्रचण्डलाई पछार्यो, ‘भैगो हामी तँसँग झगडा गर्न आएको होइन । यो छाउरोलाई दुःख नदे ! यो मलाई दे ।”किन दिनु तँलाई सित्तैमा …- के दिन्छस् तँ मलाई -‘, प्रचण्डले अझै निहुँ खोज्ने तालले भन्यो । आलोकले खाजा खर्चबाट बचाएर राखेको पाँच रुपियाँको नोट झिकेर देखाउँदै भन्यो- ‘यो पाँचको नोट दिन्छु म तँलाई । त्यो मलाई दे, हुन्छ -”जाबो पाँच रुपियाँको नोट त मलाई दिसा पुछ्न पनि काम लाग्दैन’, प्रचण्डले अनुहार खुम्च्याएर भन्यो ।
आलोकले अर्को पाँच रुपियाँ झिकेर देखाउँदै भन्यो, ‘लौ भैगो यो दस रुपियाँ दिन्छु, दिन्छस् -‘धनी बाबुको छोरो प्रचण्डलाई त्यस्ता पाँच/दस रुपियाँ के आँखा लाग्दो हो । तर, उसको खराब चाल बुझेर उसका बाबुले उसको खर्च एकदमै कम गरिदिएका थिए । चुरोट खान अचेल उसले बाबुको बगली मार्ने कि आमाको थैलो रित्याउने गरेको थियो । तर त्यो पनि सधैँ मिल्दैनथ्यो । त्यसैले कहिलेकाहीँ उसलाई पाँच/दस रुपियाँ पनि खाँचो पथ्र्यो । ऊ अहिले दस रुपियाँ देखेर दोधारमा पर्यो ।’
ए प्रचण्ड ! ली ली ! दुइ चारवटा चुरोट भए पनि आउँछ’, उसका साथीहरूले उसलाई हौस्याए । अनि उसले त्यो दस रुपियाँ लिएर छाउरो आलोकलाई दियो । कालो जीउमा सेतो खैरो बुट्टा भएको छाउरो सुन्दर थियो । छाउरो लिएर आलोक घर गयो ।बाबाको आज्ञा पाएपछि उसले छाउरोलाई तातोपानी तताएर नुहाइदियो, घाउ सफा गरेर औषधी लगाइदियो । अनि आफ्नै कोठामा आफ्नो पलङको बगलमै बोरा ओछ्याएर बस्ने ठाउँ बनाइदियो ।आमाले दूध बिस्कुट ल्याएर खान दिनुभयो । त्यो खाएपछि छाउरो आनन्दसँग बोरामा गुँडुल्किएर बस्यो ।छाउरो असाध्यै गुनिलो भएर निस्क्यो । आलोकले उसको नाम पाङ्ग्रे राख्यो । ऊ साह्रै राम्रो स्वभावको थियो । दिशापिसाब पनि जथाभावी गर्दैनथ्यो । दिशापिसाब लाग्यो भने कुइँकुइँ कराउँथ्यो । अनि ढोका खोलिदिएपछि बाहिर टाढा कतै रछानमा कि फोहोर फाल्ने ठाँउमा गरेर आउँथ्यो । ऊ आलोकलाई धेरै पछ्याँउथ्यो । जथाभावी चोरेर खाँदैनथ्यो । भोक लागे पनि कुइँकुइँ कराउँथ्यो । आमाले दूधभात ल्याएर खान दिनुभएपछि खाइपिई गरी बगैँचा, फूलबारीतिर खेल्न जान्थ्यो । चराहरूसँग लखेटीलखेटी खेल्थ्यो । कुनै नौलो मानिस घरमा आयो भने भु भु गर्दै कराउँथ्यो, तर कसैलाई टोक्ने गर्दैनथ्यो । भित्रबाट आमाले कि घरका अरू कसैले झयालबाट हेरेर त्यो नौलो मानिससँग हाँसेर राम्रोसँग बोलेपछि ऊ आफ्नो खेलतिर लाग्थ्यो ।
ऊ बराबर आलोकसँगै स्कुल पनि जान्थ्यो । त्यहाँ आलोकले सिकाएका अनेक खेलहरू देखाएर ऊ आलोकका साथीहरूलाई खुसी पनि तुल्याउँथ्यो । सबैले उसलाई माया गर्थे र केकबिस्कुट खान दिन्थे । स्कुल छुटेपछि आलोकसँगै घर र्फकन्थ्यो । अब ऊ यति सुग्घरी र राम्रो भएको थियो, उसलाई आलोक धेरैजसो आफैसँग खाटमै सुत्न दिन्थ्यो । मान्छे र पशु भए पनि आलोक र पाङ्ग्रे एक ज्यानजस्तै भएका थिए, एकै आमाका छोराहरू जस्तै थिए ।त्यस्तैमा एकपल्ट स्कुलमा देश दर्शनको कार्यक्रम बन्यो । गुरुबागुरुआमाहरूले केही छानिएका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशका केही ऐतिहासिक ठाउँमा घुमाउन लाने हुनुभयो । पन्ध्र/बीस दिनको यो भ्रमणमा आलोक पनि जाने भयो । पाङ्ग्रे पनि ऊसँग जान छट्पटायो । तर आलोकले उसलाई फकायो, ‘तैँले हामीसँग जान मिल्दैन । तँ आमाबाबाको सेवा गरेर घरै बस् । पन्ध्र/बीस दिन त हो नि ! म आइहाल्छु नि । बरु आउँदा मीठामीठा खानेकुरा ल्याइदिउँला, ज्ञानी भएर बस् ।’
पन्ध्र दिनको यो घुमाइमा आलोकको मनमा हरेक दिन पाङ्ग्रेको सम्झना आइरहृयो । उसले उसको ती नीला र मायालु आँखा, उसको चञ्चले स्वभाव, उसले बगैँचामा चराहरूलाई लखेट्तै उफ्रीउफ्री खेलेका खेल अनि आफैँसँग चौरमा खेलेका अनेक रमाइला खेलहरू कहिल्यै बिर्सन सकेन । उठ्दा, बस्दा, खाँदा र घुम्दा पनि घरिघरि आँखावरिपरि नाचिरहे । कहिले घर पुगेर त्यो प्यारो पाङ्ग्रेलाई बोकेर माया गरौ भनेर ऊ छट्पटाउँथ्यो ।पन्ध्र दिनको घुमफिर सकेर त्यो टोली घर फक्र्यो । घर आइपुग्दा निकै राती भइसकेको थियो । गुरुहरूले आलोकलाई बाहिर ढोकासम्म पुर्याएर जानुभयो । उसले आमालाई बोलायो आमाले सुनेर ढोका खोल्न आउँदै भन्नुभयो, ‘बाबुआइपुग्यौ – किन यति राती पारेको – पख है म ढोका खोल्न आउँछु ।’आमा आएर ढोका खोलिदिनुभयो । उसको स्वर सुनेर पाङ्ग्रे अत्यन्त खुसी भयो । ऊ खुसीले आमाको पछिपछि उफ्रिदै आयो । ढोका खु्लेपछि ऊ अत्यन्तै रमाएर आलोकको बुइ चढ्न झम्टिँदै आयो । पेटी निकै अग्लो थियो । तल आँगनमा सिमेन्ट लगाएको थियो । यसरी हर्षे कुइँकुइँ गर्दै उफ्रिदै आउँदा पाङ्ग्रेका गोडा कसरी लटपटिएछन् कुन्नि ऊ लगभग दुइ फिट अग्लो पेटीबाट तल आँगनको सिमेन्ट लाएको भुइँमा बज्रन पुग्यो ।’
कुइँकुइँ ! उसको घाँटीबाट पीडाको स्वर निस्क्यो । बज्रँदा उसले मुण्टोले टेक्न पुगेछ । कलिलो गर्दन ठनक्कै भाँचिएछ । घाँटीबाट अत्यन्त दर्दनाक स्वर निकाल्दै ऊ छटपटाउन थाल्यो । आलोक आत्तियो, ‘आमा के भयो पाङ्ग्रेलाई – के भयो मेरो पाङ्ग्रेलाई -‘उसले पाङ्ग्रेलाई आफ्नो काखमा लियो । आमाले भित्रबाट पानी ल्याएर पाङ्ग्रेको मुखमा हालिदिनुभो ।
पाङ्ग्रे एक पल्ट नराम्रोसँग छटपटाएर आफ्नो प्यारो आलोकको काखमा शान्त भयो । आलोकको आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खस्न थाले । उसको छाती भरियो, बोलीमा भक्कानु फुट्यो, ‘आमा – के भयो मेरो पाङ्ग्रेलाई -” मेरो पाङ्ग्रे मर्यो – पाङ्ग्रे मर्यो-‘आमा केही बोल्न सक्नुभएन । उहाँका पनि आँखा भरिएर आए । अनि बल्ल छोरालाई पाङ्ग्रेको लासबाट तानेर माथि लग्नुभयो । पाङ्ग्रेलाई वीरेले लगेर बगैँचाको एउटा स्याउको बोटको फेदमा गाडिदियो । आलोक बेहाल थियो । ऊ दुइ-तीन दिनसम्म रोइरहृयो । दुइ दिनसम्म त खाना पनि राम्ररी खाएन । धेरै फकाएपछि बल्ल तल्ल सम्हालियो ।
बाबाले उसलाई खुसी तुल्याउन एउटा अर्को राम्रो छाउरो ल्याइदिनुभयो । तर आलोकले त्यसलाई हेर्दा पनि हेरेन । त्यसपछि उसले कुनै कुकुर पालेन ।
रोचक घिमिरेकाे बाल्यकाल
March 9, 2022 March 9, 2022 Ketaketi Online